Arsenal Oo Ku Dhow Inay La Soo Wareegto Alexander Isak
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo ku dhow inay la soo wareegto Alexander Isak
April 6, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka xiriirka la leh Arsenal Alexander Isak ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu ka tago Real Sociedad xagaagan hadii ay ku guuldareystaan ​​inay u soo baxaan tartamada Yurub xilli ciyaareedka 2022-23.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Sweden ayaa kaliya ku guuleystay inuu shan gool ku dhaliyo 25 kulan oo uu saftay La Liga xilli ciyaareed adag, laakiin qaab ciyaareedkiisa xun ayaan loo maleyneynin inuu diido xiisaha Arsenal.
Isak oo ku dhibtoonaya gool dhalinta, Sociedad ayaa isaga hartay tartanka loogu jiro booska Champions League, kaalinta lixaad ee ay hadda ku jiraan.
Sida laga soo xigtay Fichajes , haddii Sociedad ay ku guuldareysato inay u soo baxdo tartamada qaaradaha, Isak ayaa hogaamin doona ka bixista kooxda xagaaga.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Adnan Januzaj , David Silva iyo Robin Le Normand ay sidoo kale ku soo bixi karaan xaaladaas, inkastoo Isak loo maleynayo inuu haysto 75 milyan ginni oo lagu burburin karo qandaraaskiisa Sociedad, kaasoo aan dhicin ilaa 2026.